महासंघले ठूलाको मात्र होइन साना व्यवसायीको पक्षमा वकालत गर्नुपर्छ : दिनेश श्रेष्ठको अन्तर्वार्ता
प्रकाशित : 4:09 pm, बिहीबार, मंसिर ११, २०७७
किशोर प्रधान प्यानलबाट जिल्ला नगरतर्फको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका दिनेश श्रेष्ठसँग निर्वाचनको सन्दर्भमा गरिएका कुराकानीको सम्पादित अंश :
संविधान बनाउँदादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा हामीले व्यवसायीलार्ई हित हुने गरी कामहरू भएका छन । त्यसका साथै उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल नै नगरी चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएका व्यवस्थाहरूमा समेत सरकारलार्ई कन्भिएन्स गरेका छौं । प्यनमा दर्ता नभई खर्च देखाउन नपाइने व्यवस्थालार्ई सरकारले एक वर्ष पछि पुनरावलोकन गरेको अवस्था छ । कर्जाको ब्याजको दरमा २ प्रतिशतसम्म गिरावट आएको छ । त्यसका साथै बैंक वित्तीय संस्थाले लिने गरेको सेवा शुल्कमा समेत कमी आएको छ ।
महासंघले ठूला व्यवसयाीको विषयमा वकालत गर्दै आएको छ । गर्नु पनि पर्छ । तर, साना तथा आम व्यवसायीको विषयमा पनि महासंघ बोल्नु पर्छ । यो विषय ठूलो पनि होइन । महासंघले सैद्धान्तीक विषयहरूलार्ई उठाउने भएकाले सानो ठूलो भन्ने हुँदैन । तर, साना उद्योगी व्यवसायीको विषयमा महासंघले गर्नु पर्ने कुरा भनेको उपभोक्ता संरक्षण हित ऐनमा भएका अव्यवहारिक विषयलार्ई परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।
चुनाव नजिकिँदै छ, मतदाताहरू कत्तिको अलमलमा परेको अनुभव गर्नु भएको छ ?
मदाताहरूले दुवै समूहको कुरालार्ई गम्भीर रूपमा अध्ययन गरेको देखिन्छ । मतदाताहरू यताको टिम र उताको टिम भन्दा पनि दुवैतर्फ आउने जाने गर्नु भएको छ । मतदाता साथीहरू कसैको दास पनि होइन । वहाँहरू स्वतन्त्र भएको हुनाले हाम्रो टिम विजयको नजिक रहेको स्पष्ट छ । स्वविवेक प्रयोग गर्दा सही निर्णय लिनका लागि साथीहरूलार्ई अनुरोध गर्दछु ।
« साढे ४ वर्ष पुरानो रेकर्ड तोडेको सेयर बजार अझै कहाँ पुग्ला ?
पिपुल्स पावरको आइपीओ आउँदै, विक्री प्रबन्धक नियुक्त »